Toddoba wax weyn in la sameeyo on your smartphone - Rule News
Toddoba wax weyn in la sameeyo on your smartphone
Shaki kuma jiro in technology mobile yimid hab aad u dheer ka badan sannadihii ugu danbeeyay, iyo horumarka laga sameeyey marka ay timaado telefoonada gacanta noo sahlay in ay ku raaxaystaan ​​kala duwan weyn ee hawlaha iyo gargaarka marka la isticmaalayo qalabka.
Halka telefoonnada gacanta our ayaa mar loo isticmaalaa oo kaliya phonecalls iyo fariimaha qoraalka ah, aan hadda samayn karaa noocyo kala duwan oo badan oo hawlaha laga bilaabo ka qalab our mobile ciyaaro online in ay qaadan sawirro iyo xataa helo amar codka. Halkan waa toddoba ka mid ah tabo cusub mobile dhulka jabiyay-ugu.
l xirka Bulshada: casriga ah ee maanta waa qumman yahay, waayo, xirka oo aad saaxiibadaa iyo qoyskaaga via goobaha sida Facebook iyo Twitter iyo kuwo kale. Inta badan u oggolaadaan marinka mid aad u fudud ugu taabashada shaashadda si aad ku xidhan karto kuwa kale, geliyaan sawiro, macluumaad share, cusboonaysiiso xaaladda iyo wax ka badan oo la kaaftoomi yar. Oo kuwa jacayl ah wax walba nostalgic, markaas Timehop app xitaa abuurtaa archive a digital ah noloshaada.
l sawiro qaado: kamaradaha The on casriga ah ayaa si isa soo taraysa casri ah sanadihii la soo dhaafay, oo taas macnaheedu waa in aad hadda isticmaali kartaa telefoonka in ay qaataan photos tayo sare leh inta aad iska bixi oo ku saabsan waxaa ka maqan baahida loo qabo in camera a digital ah ama qalab kale. Oo Google ayaa Snapseed app, waxa aad heli kartaa heer ku dhow xirfadeed ee qalabka tafatirka photo, oo dhan ka habboonaan ee smartphone.
l Ku raaxayso madadaalada: Dad badan ayaa hadda isticmaalaan tilifoonada casriga ah inay ku raaxaystaan ​​tiro balaadhan oo ah madadaalada iyagoo ku biiro ama xitaa marka guriga. Tan waxaa ka mid madadaalo sida daawashada filimaanta huleeshay via kala duwan oo takhasus leh goobaha Streaming, dhegaysato kumanaan idaacadaha online la app Streema ah, ama daawashada cajaladaha YouTube iyo waxyaabo kale oo.
l ciyaaro: Marka aad smartphone a, waxa kale oo aad leedahay qalab aad u gaar ah ciyaaraha mobile shakhsiyeed. Waxaad kala soo bixi kartaa xiiso leh iyo is-sharaxaadda kulan mobile sida Waa in aad u dhista A Doon on qalab aad sida hab of livening kor u dhimo subaxda. Oo weliba waxaad ka ciyaari kara kulan sida boosaska online iyo ciyaaraha miiska meelaha sida Springbok Casino, halkaas oo aad ku raaxaysan karaan Xoolo ah madadaalada ciyaaraha iyo noocyo kala duwan oo badan oo kulan casino dalwaddii oo dhan ka timirta ahaa oo gacantaada.
l Isticmaalaysa internet: Your smartphone ka dhigayaa mid aad u fudud si aad u hesho online iyo isticmaalaysa internet mar kasta oo aad rabto in aad, sidaa darteed wax dhib ah maleh meesha aad joogto, aad ku raaxaysan karaan inay awoodaan si ay u helaan internetka ee dunida oo dhan. Iyadoo haatan websites iyo aad u badan habeeyey qalabka mobile Waxa kale oo aad ku raaxaysan karaan waayo-aragnimo fankooda tayo sare leh markii aad isticmaasho mobile si aad u hesho online.
l Hel taam: Haddii aad rabto in aad caawimaad yar marka ay timaado in aad gasho qaab iyo helitaanka taam, waxaad ka heli kartaa gargaar aad u baahan tahay iyadoo la kaashanayo aad smartphone. Waxaad kala soo bixi kartaa kala duwan oo ka mid ah barnaamijyadooda caafimaadka iyo jir dhiska in sameyn doonaa wax walba ka siin doona macluumaad nafaqada ee tiro balaadhan oo ah cuntooyinka, si aad gacan qalab la socodka iyo raadraaca. Mid ka mid ah tusaale ahaan waa weyn yahay ee NexTrack app aan waa lacag la'aan oo keliya, laakiin sidoo kale maamula si ay u sameeyaan jimicsi xiiso leh!
l Isticmaal kaaliye shakhsi: Iyada oo ku xidhan oo casriga ah aad qabto, waxaad isticmaali kartaa qalab aad kaaliye shakhsi inuu ka caawiyo abaabulka noloshaada oo aad xogogaal. Tani waxaa ka mid ah iyadoo la isticmaalayo kaaliyayaasha digital sida Siri ka Apple ama Cortana, kaaliyaha digital for Windows 10.
Iyada oo hawlaha badan oo kala duwan oo la heli karo, waa yaab yar in telefoonada gacanta ee maanta waxay noqdeen sida qayb muhiim ah oo nolosheena.
← injineerada daaweynta kansarka Pioneering nidaamka difaaca jirka si ay ula dagaalamaan cudurka Mark Zuckerberg ku hadla oo lagu taageerayo Muslimiinta ka dib markii toddobaadkii ee 'nacaybka' →